HIM | Health in Myanmar » 2011 » October
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments
“နင်တို့ ရောဂါရမှာ မကြောက်ဘူးလား” လို့ တချို့က သူတို့ ကို မေးကြတယ်၊ “အမှန်အတိုင်း ပြောရင် ကျမလည်း ရော ဂါဖြစ်မှာ ကြောက်တပေါ့၊ ကျမအသက် ငယ်ငယ်လေး ရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အမေ့အတွက်ဆိုတော့ ရောဂါရလည်း ကျမ ဝမ်းမနည်းပါဘူး” တဲ့၊ ချစ်ချစ် အမြဲ ဒီလိုဖြေနေကျပါ။
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmarno comments
ရှားပါတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးတယောက် Yaz သုံးရာကနေ သွေးခဲပြီး သေဆုံးရတယ်လို့ စွပ်စွဲမှုနဲ့ တရားစွဲဘူးတယ်။ Michelle Pfleger ခေါ်တဲ့ ၁၈ နှစ်သမီး အမေရိကန်မလေးလဲ ဝက်ခြံ ပျောက်အောင်ဆိုပြီး တားဆေး Yaz သောက်လို့ နှလုံးရပ်ပြီး သေဆုံးသေးတယ်။
The debate about laboratory monitoring rages on
The debate about laboratory monitoring rages on. Some think that less monitoring is all right. Others worry about too little. There is no clear answer.
AIDS ကာကွယ်ဆေးသစ် တစ်မျိုးစမ်းသပ်အောင်မြင်
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments
စမ်းသပ်ဆဲ ဆေးတစ်မျိုးသည် ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ (AIDS) ရှိသော မျောက်များကို ရောဂါမှ နိုင်နင်းစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ကူညီနိုင်ကြောင်း၊ ထိုမှတစ်ဆင့် လူသားများအတွက် HIV ပိုး ကာကွယ်ဆေးနှင့် ကုသဆေးအထိ ဖော်စပ်နိုင်ရန် လမ်းပွင့်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း
လိင်တူချင်းချစ်တဲ့ သူတွေကို ဘုရားသခင်တကယ်မုန်းလား
Author: HimBur | Category: Myanmar, News, ဆောင်းပါးno comments
အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရတဲ့လူငယ်တယောက်နဲ့ လည်းဆုံဖူးတယ် သူကမေးတယ် “ကျနော်တို့လိုလူတွေကို ဘုရားသခင် မလိုးလားဘူးလား၊ ဘုရားသခင်ငြင်ပယ်ထားတဲ့ စာရင်းမှာပါလားတဲ့”။ ပြီးတော့ အသက်ထွက်ခါနီးမှာ ဘယ်တော့မှလာမတွေ့တဲ့ မိဘတွေကိူ တသသခေါ်ရင်ဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့ လူငယ်အများကြီးနဲ့လည်း တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးတယ်။
ယောက်ျားတွေ (ဂေး) တွေအတွက် HPV ကာကွယ်ဆေး
ဒီပိုး ကူးစက်ခံရရင် အရွယ်ရောက်သူ ထက်ဝက်နီးနီးမှာ လိင်လမ်းကြောင်း-ကြွက်နို့ ဖြစ်စေတယ်။ တချို့မှာ ရောဂါ လက္ခဏာ မပြပေမဲ့ ပိုးက အထဲမှာ ရှိနေနိုင်တယ်။
အဓမ္မကျင့်ဘို့ သုံးကြတဲ့ ဆေးတွေ
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar8 comments
စားစရာ နဲ့ သောက်စရာထဲ မသိအောင် ထည့်ပေးတယ်။ Disoriented ဘယ်ရောက်လို့ ရောက်နေမှန်း မသိတော့ဘူး။ Unconscious သတိ လက်လွတ် ဖြစ်မယ်။ အဓမ္မကျင့်လို့အထိ ရတယ်။
အကြွေးဖြင့် စင်ကာပူတွင် အလုပ်လုပ် နေကြသူများ
သူမ အလုပ်ဆင်းသည့်တပါတ်အတွင်းတွင် orchard tower အား စင်ကာပူရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပြီး ဘာတန်မြို့သို့ ပြည်နှင်ခံခဲ့ရသည်။ နောက်သုံးလအကြာမှာ ပြည်တန့် ဆာခေါင်းကပင် သူမအား နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အတုဖြင့် စင်ကာပူသို့ ပြန်ပို့ ပြန်သည်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အလွန်နည်းတဲ့ IUD
အခုလည်း အဲဒီ IUD ပစ္စည်း လေးက မိန်းမသားအိမ်ထဲမှာ လွတ်လွတ်ကင်းကင်း သူ့ဘာသာသူရှိနေတာ၊ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ ယောကျာ်း အင်္ဂါက မိန်းမကိုယ်ရဲ့မွေးလမ်းကြောင်း ထဲမှာပဲ ဆက်ဆံရတာမို့ အဲဒီသားအိမ် ထဲက ပစ္စည်းနဲ့ အဝေးကြီးပါ။ ဘယ်လို မှ မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး။
Comprehensive paper on the science of tuberculosis
Here isacomprehensive paper on the science of tuberculosis. TB. If you areaperson living with HIV or work with people living with HIV it is good to know all about this disease.
အပျိုစင်လေးများအတွက် သိကောင်းစရာ (၉)
Author: HimBur | Category: Myanmar, အပျိုစင်1 comment
“ခုခေတ်က အိုင်တီခေတ်ကွဲ့၊ ဒီတော့ ကလေးလိုချင်ရင် အမျိုးသားသုတ်ရည်ကိုဝယ်ပြီး ဒါမှမဟုတ်လဲ လှူထားတာ ရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒါနဲ့ အမျိုးသမီး မျိုးဥနဲ့ပေါင်းပြီး ဖန်ပေါင်းချောင်ထဲထည့်၊ သန္ဓေအောင်မှ သားအိမ်ထဲ ပြန်ထည့်ပြီးတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာပေါ့ကွယ်”
Menstrogen (မင်စထိုဂျင်) ဆေး
သမီးအသက်က ၂၇ နှစ်ပါ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိတာ မသိပဲ Mestrogen ထိုးမိရင် ဘာဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်မလဲ သိချင်လို့ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီစာကို ဖတ်ပြီးတာနဲ့ အကြောင်းပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ရာသီမပေါ်တာ ၃ ရက်လွန်သွားတာနဲ့ ဆေးသွားထိုးမိပါတယ်။ ပြီးမှ ဆီးစစ်ကြည့်တော့ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတာ သိရပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ အကြံပေးစေလိုပါတယ်။